अन्तरवार्ता Archives - फ्रन्टलाईन नेपाल
शैली बस्नेत, स्ट्यान्डअप कमेडियन पत्रकारिता छाडेर कमेडीतिर किन लाग्नुभयो ? आफ्नो रुचि फलो गर्दै जाँदा यहाँ पुगियो । यसको पनि ठेगान छैन । खोला जस्तै बग्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ, कहिले पहाड कहिले मैदान, कहिले झरना बन्न पुगिन्छ । एउटै पेशामा लागेर केश फुलाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । मानिसहरूलाई हँसाउन सजिलो कि रुवाउन ? सजिलो त रुवाउन नै हो । दुनियाँमा दुःखको कमी […]
तपाईँले डाक्टरी किन पढ्नु भएको ? यो धेरै पुरानो र पहिलेको कुरासँग जोडीएको छ । बाल्यकालसँग पनि जोडीएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा देखेको चित्र र म आफैँले भोगेको पीडा पनि छ । त्यो बेलामा रोल्पामा हजारौँ कमरेडहरूले आफ्नै आँखा अगाडि दिएको बलिदानी र क्रान्तिले त्यतिखेर भोग्नु परेको क्षति । यिनै विषयले मलाई कता कता […]
पाल्पामा जन्मिएकी नीलम कार्की ‘निहारिका’ सशक्त नारी हस्ताक्षर हुन् । २०७४ का लागि उनको उपन्यास योगमायाले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । ऐतिहासिक विषयवस्तुमा खोज, अनुसन्धान गरेर लेखिएको योगमायाले प्रतिष्ठित पुरस्कार पाएपछि उनको चर्चा थप चुलिएको छ । यसअघि नीलमका हवन (कथा–संग्रह), ब्रेन फिभर (कविता–संग्रह), कागजमा दस्तखत (कथा–संग्रह), नीलम कार्की निहारिका का कविता (कविता–संग्रह), बेली […]
सोविता सिम्खडाको पहिचान चलचित्र अभिनेत्रीका रुपमा सिमित थियो । उनले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘नमस्ते कलिउड’ कार्यक्रम दुई वर्ष चलाईन् । त्यस्तै झण्डै डेढ वर्ष डान्स कम्पिटिसनमा आधारित ‘सरोबर कार्यक्रम’ पनि चलाईन् । त्यो पनि नेपाल टेलिभिजनबाटै बज्थ्यो । ‘नमस्ते कलिउड’ कार्यक्रम चलाउँदा-चलाउँदै चलचित्रमा अभिनय गर्न पुगेकी सोविता यतिबेला उपन्यासकारका रुपमा उदाउँदैछिन् । ओशोबाट प्रभाबित सोविताको […]
नेपालका अन्य राजनीतिक दल भन्दा फरक एजेन्डा सहित स्पष्ट विचार बोकेको राजनितिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खराब चुनाबी परिणाम पश्चात् नयाँ कार्ययोजनाका साथ जनताको मन जित्नेगरि बिभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दैछ । यसै क्रममा संगठनको सुदृढीकरण तथा पुन:संरचनालाई प्रमुख आबश्यकता ठानेको राप्रपाले पार्टीको महत्वपूर्ण भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको राष्ट्रिय भेला यहि २८ र […]
इमेज एफएम ९७.९ की कार्यक्रम सञ्चालक समेत रहेकी प्राश्नाले स्वर भरेका आवाज देउ, गाउले जीवन गीत निकै लोकप्रिय छन् । तेर्‍ह वर्षकै उमेरमा ‘छिमेकी साँझ’ बाट सांगीतिक यात्रा सुरु गरेकी प्राश्ना नाँच्न, गाउँन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । उनले झण्डै ३० वटा नेपाली चलचित्रमा पाश्र्व गीत गाएकी उनले अहिले सम्म झण्डै पाच सय गीत गाईसकेकि छिन् ।
१६ मंसिर २०७४, शनिबार १७:१३ January 3, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
सुजाता कोइराला नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एबं भूतपूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा सुष्मा कोइरालाकी एक मात्र सन्तान सुजाताले पार्टीको विदेश बिभाग प्रमुखका रुपमा पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । क्यान्सर लागेपछि सुजाता कोइरालाको चर्चा चुलियो । उहाँले नेपाल सरकारसँग उपचार खर्च माग गरेपछि चौतर्फी आलोचना पनि खेप्नुपर्‍यो […]
१ मंसिर २०७४, शुक्रबार १६:२२ January 1, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)